Faahfaahin: Dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay Buula-berde ~ RAYO TV BORAMA
Faahfaahin: Dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay Buula-berde
By Ahmed Ciiltire media at 6:46 AM News No comments
Xilli Goordanbe habeenkii xalay ay ahayd ayaa dagaal culus ka dhacay gudaha magaalada Buula-berde ee Gobolka Hiiraan. Buula-berde maalmo ka hor ayaa Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ku guuleysteen in ay ka qabsadaan ururka al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2009 ka arriminaayey halkaas.
Dagaalka xalay ka dhacay Buula-berde ayaa ku bilowdey gaari lagu soo xirey Bom kaas oo qof naftiisa halligey ku qarxiyey Hotel Camalow, halkaas oo ay deganaayeen maamulka Gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka iyo Saraakiil kale oo Jabuutiyaan ah.
Subaxnimadii maanta oo SIgaarsiinta dib loogu furey Buule-berde ayaa dad goobjoog ah Saxaafadda u sheegeen sidee wax u dheceen.
Kadib qaraxa Hotelka ayaa Malayshiyaad ka tirsan al-Shabaab ay magaalada ka soo weerareen dhawr jiho waxaana is qabsatey rasaasta oo ahayd mid aad u xoogan, taas oo socotey tan iyo waaberkii maanta, sida ay saxaafadda u sheegeen dad goobjoog ah.
Khasaaraha ka dhashey ayaa ah mid aad u ballaaran, waxaana la sheegayaa in dhimashada ka dhacdey Hotelka la qarxiyey iyo dagaalkaba ay gaareyso dad ku dhaw 15 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka mid ah AMISOM.
Dhaawaca ayaa wararku sheegayaan in ay gaarayaan 40 dad gaaraya, Magaalada ayaa u muuqata mid go’doon ah oo dhinac kasta ay ka jiraan Malayshiyaadka al-Shabaab, waxaana adag in Dhaawaca laga saaro haddii aan la helin Diyaarad.
Ciidamada Dowladda kuwa AMISOM ayaa todobaadkii hore qabsadey magaalada Buulaberde oo ka tirsan Gobolka Hiiraan. Ururka alShabaab oo aan wax khasaaro weyn ah gaarin ayaa magaalada uga baxay dhanka Bari, waxaana ay dib u qabsadeen Tuulooyin ay markii hore ka soo gudbeen ciidanka is-bahaystey sida Buq-Aqbaale